Izindaba - Engxenyeni yokuqala yonyaka, iChina ikhiqize amabhethri e-lithium-ion ayi-7.15 namabhayisikili kagesi ayisigidi esingu-11.701
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, phakathi kwemikhiqizo emikhulu yezimboni zokukhiqiza amabhethri eChina, ukukhishwa kwamabhethri e-lithium-ion kwaba yi-7.15 billion, ngokunyuka konyaka nonyaka ngama-1.3%; ukukhishwa kwamabhayisikili kagesi kwakuyizigidi eziyi-11.701, kukhuphuke unyaka nonyaka ngo-10.3%.
Ngokwe-website yoMnyango wezezimboni nobuchwepheshe bolwazi, muva nje, uMnyango wezimboni zezimpahla zabathengi woMnyango wezimboni nobuchwepheshe bolwazi ukhiphe ukusebenza kwemboni yamabhethri kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020.
Ngokwemibiko, kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, phakathi kwemikhiqizo emikhulu yomkhakha wokukhiqiza amabhethri eChina, ukukhishwa kwamabhethri e-lithium-ion kwakungu-7.15 billion, ngokunyuka konyaka ku-1.3%; ukukhishwa kwamabhethri e-lead-acid kwakungu-96.356 million kilovolt ampere amahora, ukwanda ngo-6.1%; ukukhishwa kwamabhethri ayisisekelo namabhethri ayisisekelo (uhlobo olungenayo inkinobho) kwakungu-17.82 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-0.7%.
NgoJuni, ukukhishwa kukazwelonke kwamabhethri e-lithium-ion kwaba yi-1.63 billion, ukwanda kwe-14.2% unyaka nonyaka; ukukhishwa kwamabhethri e-lead-acid kwakungu-20.452 million kwh, kukhuphuke ngo-17.1% unyaka nonyaka; futhi ukukhishwa kwamabhethri ayisisekelo namabhethri ayisisekelo (uhlobo olungenayo inkinobho) kwakungu-3.62 billion, ngokunyuka konyaka nonyaka nge-15.3%.
Ngokuya ngezinzuzo, kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, imali engenayo yokusebenza kwamabhizinisi okukhiqiza amabhethri ngaphezu kweSayizi Ebekiwe ezweni lonke ifinyelele kuma-yuan angama-316.89 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-10.0%, kanti inzuzo ephelele yayingama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-12.48, ngonyaka Ukwehla konyaka ngo-9.0% ..
Ngosuku olufanayo, uMnyango wezimboni zezimpahla zabathengi woMnyango wezezimboni nobuchwepheshe bolwazi uphinde wakhipha ukusebenza komkhakha wamabhayisikili kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, phakathi kwemikhiqizo emikhulu yomkhakha wokukhiqiza amabhayisikili kaZwelonke, ukukhishwa kwamabhayisikili kagesi kwaba yizigidi eziyi-11.701, ukwanda ngo-10.3% unyaka nonyaka. Phakathi kwabo, ukukhishwa kwamabhayisikili kagesi ngoJuni kwakuyizigidi ezingama-3.073, kukhuphuka ama-48.4% unyaka nonyaka.
Ngokuya ngezinzuzo, kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, imali engenayo yokusebenza yamabhayisikili kagesi amabhizinisi wokukhiqiza amabhayisikili ngaphezulu kweSayizi Eqokiwe ezweni lonke ifinyelele kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-37.74, ukwanda konyaka ngonyaka ngo-13.4%, kanye nenzuzo ephelele engu-1.67 billion yuan, ukwanda konyaka nonyaka ngama-31.6%.
12v Lithium Ion Ibhethri elishajekayo, 3.7 Ibhethri elishajekayo, Iphakethe Lithium Battery Pack eyi-12 Volt, Li Ibhethri, 18650 uNimh, I-Lithium Ion Polymer Ibhethri, Yonke Imikhiqizo